Axmed Nuur Cali Jimcaale oo ka hadlay go’aanka Mareykanka ee Al-Barakaat iyo cidda ka caawisay – Hornafrik Media Network
Dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland oo hadda ka socda Hadaaftimo
Xaaska Riek Machar oo sheegtay in seygeeda uu lamid yahay qof maxbuus ah
Haweenka Sucuudiga oo loo ogolaaday in ay dheelaan kubadda cagta
Caabuqa Korona oo ku sii baahaya dalalka qaaradda Yurub
Axmed Nuur Cali Jimcaale oo ka hadlay go’aanka Mareykanka ee Al-Barakaat iyo cidda ka caawisay
Somali NewsWARARKA MAANTAXULASHADA
By Liibaan Nuur	 On Feb 13, 2020
Guddoomiyaha shirkadda Hormuud Axmed Nuur Cali Jimcaale ayaa ka hadlay xayiraada maanta laga qaaday sharkadiisii hore ee Al-Barakaat, taas oo dowladda Mareykanku ay xayiraad ku soo rogtay sanadkii 2001-dii, wax yar un kadib weerarkii lagu qaaday daarihii mataanaha ahaa ee New York.
Guddoomiye Axmed Nuur oo u waramay laanta af-Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in dadaalka ugu badan ee loogu fasaxay hantida bixisay madaxda hadda hoggaamisa dowladda Soomaaliya, isagoo si gaar ah ugu mahad celiyey Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo uu sheegay in seddaxdii sano ee uu talada hayey ay si joogto ah uga wada xariirayeen arinta sharkaddaas.
Sidoo kale Axmed Nuur ayaa u mahad celiyey madaxweynaha dowladda Jabuuti oo uu sheegay in dadaal badan uu isna ku bixiyey arintaan iyo dhamaan dadkii kale eek ala qeyb qaatay sidii loogu soo fasixi lahaa hantidiisa.
Waxa uu sheegay in lagu eedeeyey in shirkadiisu ay xariir la laheyd ururka Al-Qaacida, balse lagu waayey wax cadeymo ah, taas oo uu sheegay in ay kaliftay in laga qaado xayiraada.
Lacagta ugu badan ee laga xayiray ayuu sheegay in ay ku xanibneed dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta, halka dalka labaadna uu ahaa Mareykanka.
Guddoomiye Axmed Nuur waxa uu sheegay in muddii ay xayiraaddu saarneed shirkaddisa khasaare badan ay soo gaartay, waxuuna dowladda Mareykanka ka dalbaday mag dhaw iyo in arintooda dib loo fiiriyo, isagoo xusay in ay looyarro qabsadeen.
Farmaajo oo markii ugu horreysay raalli gelin siiyay Somaliland
Ethiopia oo ansixisay sharci ka dhan ah hadallada naceybka
Taliye ku xigeenkii militeriga oo soo bandhigay warqad uu isku casilay laba maalin…
Liibaan Nuur	 Feb 20, 2020 0
Liibaan Nuur	 Feb 22, 2020 0
A minister escapes from a prison in Mogadishu
Somalia, Ethiopia and Eritrea pledge joint anti-terror war
Kenya must arrest and return escaped Jubaland minister to…